Iyo Yakarasika Pfuma, yemahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Ino nguva tiri kungotaura nezve mutambo watinogona kurodha mahara kwenguva yakati rebei, nekuti parizvino vagadziri varega kupa mafomu avo kwenguva yakati rebei, zviri pachena kuti ivo vari kutogadzirira Kisimusi uye kuzvipira kune chimwe chinhu. Mutambo watiri kutaura nezvazvo nhasi, Iyo yakarasika pfuma mutambo une mutengo wenguva dzose we1,99 euros muApp Store, asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikopa pasina muripo. Ichi chakavanzika uye mutambo wepuzzle uri muSpanish, saka haizove chikonzero chekutadza kuunakidzwa.
Iyo yakarasika pfuma mutambo watinayo basa rekutsvaga iro rakarasika pirate pfuma mumutambo wepuzzle uyo unotibvumidza kuti tizvivaraidze kwenguva yakareba. Tichafanirwa kutsvaga mubako revapirati, tembere yekare, zvimiro zvevagari vemiti vekare kuti vawane ndima dzakavanzika, zviyeuchidzo zvekutibatsira kuwana hupfumi, uye zvine mutsindo zvirahwe zvekusvika kwatiri kuenda.
Hunhu hweakarasika Pfuma
Inoshamisa tsika-yakagadzirirwa HD mifananidzo!
Tsika soundtrack kuumbwa uye mhedzisiro mhedzisiro!
Yakabatanidzwa tip system yekuti paunomira
Mepu ine simba yekuratidza iwo masikirini awakashanyira uye nzvimbo yauri ikozvino
Iyo kamera inotora mifananidzo yezviratidzo uye zviratidzo sezvaunozviwana
Zvizhinji zvepuzzle, zviyeuchidzo uye zvinhu
Kufambira mberi kwako kunochengetwa otomatiki
Inowanikwa kumafoni uye mapiritsi!
Iyo yakarasika pfuma inobata 130 MB pane yedu kifaa, uye inoenderana neIOS 6.0 kana gare gare, inoenderanawo neiyo iPhone, iPad kana iPod touch. Chinhu chete chakashata pamutambo uyu ndechekuti haufambirane neMutambo Center, saka hautibvumidze kuyananisa kufambira mberi kwedu pane zvimwe zvigadzirwa.
Hunt nokuda Kwepfuma Yakarasika4,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iyo yakarasika pfuma, yemahara kwenguva shoma
Kutenda nenhau, ini ndoda iyi yemuvandudziri mitambo uye uyu mugadziri anga asina.